EWAMT: Mianatra mamahana bilaogy mba hanompoana ny vondrom-piarahamonina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Jolay 2018 3:38 GMT
Nikarakara atrikasa roa hafa ny volana Jona 2009 ny tetikasa tohanan'ny Rising Voices ‘Fanohanana ireo Vehivavy Mpikatroka amin'ny Teknikan'ny Media’ (EWAMT). Taorian'ny fahombiazan'ny atrikasa voalohany tamin'ny volana May, dia nahazo fangatahana avy amin'ny FTMF maro ny tetikasa mba hampiditra ny kandidàn'izy ireo ao amin'ny atrikasa manaraka. Na dia nisy aza ny fanamelohan'ny lehilahy nientanentana sasany milaza ho misy fanavakavahana satria natokana ho an'ny vehivavy ihany ny atrikasa. Nanoratra ny talen'ny tetikasa EWAMT, Ghaida'a al_Absi:
Or Illaftrain avy amin'i أم إيلاف
Rights and freedoms in Yemen avy amin'ny Group Blog
2jayzworld avy amin'i Jumana
Yemeni Notes avy amin'i Ebtisam Al-Mohmmdy
You And Your Home avy amin'i Bushra
Dewdrops avy amin'i صديقة الورود
Yemen Al-Saeed avy amin'i Huda
Powerful avy amin'i Alaqwiyaa
Shells avy amin'i Pearl
Life Maker Foundation Yemen avy amin'ny Group Blog
Rose avy amin'i Flowers
We are the youth of today avy amin'i Princess
Man avy amin'i انسان
Ambitious project avy amin'i Kholoud
Capacity constraints in the creative avy amin'i قدراتي
Sense avy amin'i Rahaf
Pearl beads avy amin'i Abeer Aeriqi
Our Environment avy amin'i باسمك نحيا
Our avy amin'i Lena
Beautiful One avy amin'i Haifa'a
Friendship avy amin'i Soad
Lamya Sky avy amin'i Lamya
Moon Candles avy amin'i Tears in the sunset
Tips avy amin'i رجاوي
Your health the most important avy amin'i Hopeful
Lines avy amin'i Albatool
alsnnono avy amin'i dommo3 (shorouq alnono)
Meet avy amin'i Smart
Prospects avy amin'i Paths
across avy amin'i Jamal
Nisy lahatsoratra bilaogy maromaro navoaka tao amin'ny bilaogy voalaza etsy ambony avy any Yemen. Hiezaka hanasongadina ny sasany tamin'izy ireo aho. Kanefa miangavy anao mba hijery izany amin'ny antsipiriany amin'ny fampiasana ny tranonkala fandikanteny toy ny Google Translate ao anatin'izany ny bilaogin'ny tetikasa.
Nanoratra momba ny firohotan'ny mpitsoa-ponenana Somaliana maro tao Yemen sy ny tsy fandraisana andraikitry ny manampahefana amin'ny famahana ny olana i Huda .
Faly nandray anjara tamin'ny atrikasa i Soad :
Nanoratra tao amin'ny bilaoginy manokana ihany koa izy momba ny fisakaizana manokana. Nanoratra momba ny fiankinan-doha tao Yemen i Life Maker Foundation Yemen .
Nanoratra momba ny zon'ny ankizy hiaina amim-pilaminana i Lena. Niresaka momba ny dikan'ny atao hoe ankizy eny an-dalambe i Rahaf .
Nanoratra momba ny fomba hampiroboroboana ny fananana fahatokisan-tena ho an'ny zanaka i Bushra .
Nanoratra tamin'ny teny Anglisy mikasika ny fomba fijeriny ny finoana Islamo any Etazonia i Jumana .